तुलसीलाई छतमाथि राख्ने गर्नुभएको छ ? यो दिशामा फर्काउनुहोस् चम्किन्छ भाग्य – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/तुलसीलाई छतमाथि राख्ने गर्नुभएको छ ? यो दिशामा फर्काउनुहोस् चम्किन्छ भाग्य
तुलसीलाई छतमाथि राख्ने गर्नुभएको छ ? यो दिशामा फर्काउनुहोस् चम्किन्छ भाग्य
काठमाडौँ । घरमा राखिएको बस्तुको शुभ, अशुभ दिशा बताइने गरिन्छ। कुनै पनि बस्तु सही दिशामा राख्दा वास्तुदोष हट्ने तथा भाग्य चम्किने विश्वास गरिन्छ। ज्योतिषाचार्य मनिष शर्माले घरमा राखिने बस्तुका बारेमा सही दिशा बताएका छन् । यस्ता छन् उनले बताएका केही नियम :
१) घरमा तुलसी लगाउने परम्परा पहिले देखिनै चलिआएको छ। घरमा तुलसी रोप्दा देवी देवताको विशेष कृपा मिल्ने विश्वास गरिन्छ। तर तुलसी सही दशामा लगाउनु भएन भने शुभ फल प्राप्त नहुने विश्वास गरिन्छ। घरको छत वा आँगनको उत्तर दक्षिण दिशामा तुलसी लगाउनु उत्तम मानिन्छ।
२) यदी घरमा भगवान श्रीगणेशको मुर्ति वा तस्वीर छ भने यसलाई उत्तर पूर्व दिशामा राख्नु पर्दछ। घरमा गणेश भगवानको सिन्दुरी फोटो लगाउदा पनि शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। यो तस्वीरलाई पनि तपाई उत्तर पूर्वको दिशामा लगाउनु पर्दछ।
३) दियो तथा धूप जस्ता पुजाका सामान घरको दक्षिण पूर्व दिशामा राख्नुहोस्। यो दिशा अग्नि सम्बन्धीत बस्तुका लागि शुभ मानिन्छ।
४) सात घोडाको रथमा सवार सूर्यदेवको तस्वीर घरको पूर्वी दिशामा लगाउनुहोस्। हरेक दिन बिहान यस तस्वीरको दर्शन गर्नुहोस्। यसो गर्दा घरमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ।
५) घरको हल वा बैठक कोठामा पहाड वा उडिरहेका पंक्षिका तस्वीर लगाउनुहोस्। त्यस्तै श्रीकृष्णका बाल्यकालका तस्वीर पनि लगाउनु शुभ मानिन्छ।
६) बेडरुममा राधा कृष्णको तस्वीर लगाउनुहोस्। यदी घरमा महिला गर्भवति छिन् भने कृष्णका बाल्यकालका तस्वीर टाँस्नुहोस्।